सदोमको भ्रष्टता: मानिसको लागि रिसउठ्दो, परमेश्‍वरको लागि क्रोधित तुल्याउने | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
उत्पत्ति १९:१-११ अनि साँझमा दुई स्वर्गदूतहरू सोदोममा आए; र लोत सोदोमको प्रवेश द्वारमा बसेका थिए: तिनीहरूलाई देखेर लोत तिनीहरूलाई भेट्न खडा भए; अनि तिनले निहुरेर दण्डवत गरे; अनि तिनले भने हेर्नुहोस्, मेरा मालिकहरू, म बिन्ती गर्छु, आफ्ना दासको घरमा आउनुहोस् र सारा रात बिताउनुहोस्, र आफ्ना खुट्टाहरू धुनुहोस्, सबेरै उठ्नुहोस् र आफ्नो बाटो लाग्‍नुहोस्। तब तिनीहरूले भने, हुन्‍न; तर हामी सारा रात सडकमा गुजार्नेछौँ। अनि उनले तिनीहरूलाई धेरै कर लगाए; अनि तिनीहरू तिनीमाथि जाइलागे, र उनको घरमा पसे; र उनले तिनीहरूको निम्ति भोज तयार पारे, खमिर नहालेको रोटी बनाए र तिनीहरूले खाए। तर तिनीहरू सुत्‍नु अगाडि सहरका मानिसहरू, सोदोमका बृद्ध र जवान चारै तिरका सबै मानिसहरू समेतले वरिपरिबाट घरलाई घेरे: अनि तिनीहरूले लोतलाई बोलाएर तिनलाई भने, आज राती तिम्रोमा आएका मानिसहरू कता छन्? तिनीहरूलाई हामीकहाँ ल्याऊ ताकि हामीले तिनीहरूलाई चिन्‍न सकौं। अनि लोत बाहिर ढोकामा तिनीहरूकहाँ गए र आफ्नो पछाडिको ढोका बन्द गरे र भने, दाजुभाइहरू, म तपाईंहरूसँग बिन्ती गर्छु यति धेरै दुष्ट नबन्‍नुहोस्। हेर्नुहोस्, अहिले मसँग दुई छोरीहरू छन् जसले कुनै पनि पुरुषलाई चिनेका छैनन्; म बिन्ती गर्छु कि म तिनीहरूलाई बाहिर तपाईंहरूकहाँ ल्याउँछु र तपाईंहरूले आफ्ना आँखाले राम्रो लाग्‍ने काम तिनीहरूलाई गर्नुहोस्: यी मानिसहरूलाई मात्रै केही नगरिदिनुहोस्; किनकि तिनीहरू मेरो घरको छायाँमा आएका छन्। अनि तिनीहरूले भने, पछि हट्। र तिनीहरूले फेरि भने, यो मान्छे यहाँ बस्‍न आयो र ऊ हाम्रो न्यायधीश बन्‍न खोज्छ: अब हामी तिनीहरूसँग भन्दा नराम्रो व्यवहार तँसँग गर्छौँ। अनि तिनीहरूले त्यस मानिस, लोतलाई धकेले र ढोका फोर्नलाई नजिक आए। तर ती मानिसहरूले आफ्ना हात अगाडि बढाए र लोतलाई घरभित्र आफू भएका ठाउँमा ल्याए अनि ढोका बन्द गरे। अनि घरका ढोकामा भएका साना र ठूला मानिसहरूलाई अन्धा तुल्याइदिए: फलस्वरूप तिनीहरू ढोका फेला पार्न नसकेर थाके।
यी खण्डहरूबाट, सदोमको दुष्टता र भ्रष्टता पहिले नै मानिस र परमेश्‍वर दुवैको लागि घृणास्पद हदमा पुगिसकेको थियो, त्यसकारण परमेश्‍वरको नजरमा त्यो सहर नष्ट गरिनयोग्य भइसकेको थियो भन्‍ने कुरालाई देख्‍नु त्यति कठिन छैन। तर यो शहरलाई नष्ट गरिनुभन्दा पहिले यो सहरभित्र के भयो? यी घटनाहरूबाट मानिसहरूले कस्तो प्रेरणा पाउन सक्छन्? यी घटनाहरूप्रतिको परमेश्‍वरको मनोवृत्तिले मानिसहरूलाई उहाँको स्वभावको बारेमा के देखाउँछ? सम्पूर्ण कथालाई बुझ्‍नको लागि, हामी धर्मशास्‍त्रमा के अभिलेख गरिएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर पढौं …
त्यो रात, लोतले परमेश्‍वरका दुई जना सन्देशवाहकहरूलाई स्वागत गरे र तिनीहरूको लागि भोज तयार गरे। खानपान गरिसकेपछि, तिनीहरू सुत्‍न लागेको बेला, सहरभरिका मानिसहरू आएर लोतको वासस्थान घेरे र तिनलाई बोलाए। धर्मशास्‍त्रले अभिलेख गरेअनुसार, तिनीहरू भन्दै थिए, “आज राती तिम्रोमा आएका मानिसहरू कता छन्? तिनीहरूलाई हामीकहाँ ल्याऊ ताकि हामीले तिनीहरूलाई चिन्‍न सकौं।” कसले यी शब्‍दहरू बोले? कसको लागि यी शब्दहरू बोलिए? यी शब्‍दहरू लोतको वासस्थानबाहिर चिच्याइएका र लोतले सुनून् भनेर बोलिएका सदोमका मानिसहरूका शब्‍दहरू थिए। यी शब्‍दहरू सुन्दा कस्तो लाग्छ? के तँ क्रोधित हुन्छस्? के यी शब्‍दहरूले तँलाई घृणाको महसुस गराउँछ? के तँमा रिस उम्लेर आइरहेको हुन्छ? के यी शब्‍दहरूमा शैतानको दुर्गन्ध आउँदैन र? के यी शब्‍दहरूमार्फत, तैँले यस सहरमा भएको दुष्टता र अन्धकारलाई अनुभूति गर्न सक्छस्? के तैँले यी मानिसहरूले बोलेका शब्‍दहरूबाट तिनीहरूको व्यवहारका क्रूरता र जङ्गलीपनलाई अनुभूति गर्न सक्छस्? के तैँले तिनीहरूको बानीबेहोरामार्फत तिनीहरूको भ्रष्टताको गहिराइलाई अनुभूति गर्न सक्छस्? के तिनीहरूको बोलाइको विषयवस्तुमार्फत, तिनीहरूको दुष्ट प्रकृति र जङ्गली स्वभाव तिनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको थियो भन्‍ने देख्‍नु कठिन छैन। लोतबाहेक, यस सहरको एक-एक व्यक्ति शैतानभन्दा फरक थिएन; अर्को नयाँ व्यक्ति देख्दा मात्रै पनि यी मानिसहरूलाई ती व्यक्तिहरूलाई हानि गर्ने र निल्‍ने चाहना जाग्यो…। यी कुराहरूले सहरको भयानक र भयङ्कर प्रकृतिका साथै यस सहरवरिपरि रहेको मृत्युको रापको अनुभूति मात्रै दिँदैनन्, बरु यिनले त यसको दुष्टता र हत्यारापनको अनुभूति पनि दिन्छन्।
अमानवीय डाँकुहरू, मानव प्राणलाई निल्‍ने उग्र इच्‍छाले भरिएका मानिसहरूको आमने-सामने हुँदा, लोतले कस्तो प्रतिक्रिया दिए? धर्मशास्‍त्रअनुसार: “दाजुभाइहरू, म तपाईंहरूसँग बिन्ती गर्छु यति धेरै दुष्ट नबन्‍नुहोस्। हेर्नुहोस्, अहिले मसँग दुई छोरीहरू छन् जसले कुनै पनि पुरुषलाई चिनेका छैनन्; म बिन्ती गर्छु कि म तिनीहरूलाई बाहिर तपाईंहरूकहाँ ल्याउँछु र तपाईंहरूले आफ्ना आँखाले राम्रो लाग्‍ने काम तिनीहरूलाई गर्नुहोस्: यी मानिसहरूलाई मात्रै केही नगरिदिनुहोस्; किनकि तिनीहरू मेरो घरको छायाँमा आएका छन्।” लोतले यी शब्‍दहरूद्वारा यसो भन्न खोजिरहेका थिए: सन्देशवाहकहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि तिनी आफ्‍नी दुई छोरीलाई त्याग्‍न तयार थिए। कुनै पनि तर्कशील हिसाबमा, यी मानिसहरूले लोतका सर्तहरूमा सहमति जनाई दुई सन्देशवाहकलाई केही पनि नगर्नुपर्थ्यो; आखिर, सन्देशवाहकहरू तिनीहरूका लागि पूर्ण रूपमा अपरिचित थिए, तिनीहरूसँग कुनै सम्‍बन्ध नभएका र तिनीहरूका रुचिहरूमा कहिल्यै पनि कुनै हानि नपुर्‍याएका मानिसहरू थिए। तैपनि, तिनीहरूका दुष्ट प्रकृतिद्वारा उत्प्रेरित भएर, तिनीहरूले यस विषयलाई त्यतिकै छोडेनन्, बरु तिनीहरूका प्रयासलाई अझै तीव्र बनाए। यहाँ, तिनीहरूबीचको अर्को कुराकानीले मानिसहरूलाई निःसन्देह रूपमा नै यी मानिसहरूका साँचो, क्रूर प्रकृतिको बारेमा थप ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ, यसको साथै यसले मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले किन यस सहरलाई नष्ट गर्न चाहनुभयो भन्‍ने बारेमा स्पष्ट हुन र बुझ्‍न पनि सहयोग गर्छ।
त्यसो भए, तिनीहरूले यसपछि के भने त? बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ: “पछि हट्। र तिनीहरूले फेरि भने, यो मान्छे यहाँ बस्‍न आयो र ऊ हाम्रो न्यायधीश बन्‍न खोज्छ: अब हामी तिनीहरूसँग भन्दा नराम्रो व्यवहार तँसँग गर्छौँ। अनि तिनीहरूले त्यस मानिस, लोतलाई धकेले र ढोका फोर्नलाई नजिक आए।” तिनीहरूले किन लोतको ढोका फोर्न चाहन्थे? कारण के थियो भने तिनीहरू ती दुई सन्देशवाहकहरूलाई हानि गर्न अत्यन्तै आतुर थिए। यी सन्देशवाहकहरू किन सदोम आएका थिए त? तिनीहरू त्यहाँ आउनुको उद्देश्य लोत र तिनको परिवारलाई बचाउनु थियो, तर यो सहरका मानिसहरूले तिनीहरू आधिकारिक पद ग्रहण गर्न आएका हुन् भनेर गलत रूपमा सोचेका थिए। सन्देशवाहकहरूको उद्देश्यको बारेमा नसोधीकन, यो सहरका मानिसहरूले पूर्ण अनुमानकै आधारमा मात्रै यी दुई सन्देशवाहकलाई जङ्गली तवरले हानि गर्ने इच्‍छा गरे; तिनीहरूले तिनीहरूसँग कुनै सम्‍बन्ध नै नभएका दुई जना मानिसहरूलाई हानि गर्न चाहे। यो सहरका मानिसहरूले तिनीहरूका मानवता र तर्कलाई पूर्ण रूपमा गुमाएका थिए भन्‍ने कुरा स्पष्टै छ। तिनीहरूको पागलपन र जङ्गलीपन पहिले नै मानिसहरूलाई हानि गर्ने र निल्‍ने शैतानको दुष्ट प्रकृतिभन्दा फरक थिएन।
यी मानिसहरूलाई हस्तान्तरण गर् भनेर जब तिनीहरूले लोतलाई भने, तब लोतले के गरे त? पाठबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि लोतले तिनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेनन्। के लोतले परमेश्‍वरका यी दुई सन्देशवाहकलाई चिनेका थिए? अवश्य थिएनन्! तैपनि, किन तिनले यी दुई मानिसहरूलाई बचाउन सके? के तिनलाई तिनीहरू के गर्न आएका थिए भन्ने थाहा थियो? तिनीहरू आउनुको कारणबारे तिनी अनभिज्ञ रहेको भए पनि, तिनलाई तिनीहरू परमेश्‍वरका सेवक हुन् भन्‍ने थाहा थियो, त्यसकारण तिनले तिनीहरूलाई आफ्‍नो घरमा लगे। परमेश्‍वरका यी सेवकहरूलाई तिनले “प्रभु” भन्‍ने पदवीले बोलाउन सके भन्‍ने कुराले लोत सदोमका अरू मानिसहरूजस्ता नभई परमेश्‍वरलाई निरन्तर पछ्याउने व्यक्ति थिए भन्‍ने देखाउँछ। त्यसकारण, जब परमेश्‍वरका सन्देशवाहकहरू तिनीकहाँ आए, तिनले आफ्‍नै ज्यान जोखिममा पारी यी दुई सेवकलाई आफ्‍नो घरमा लगे; यसअलावा, यी दुई सेवकलाई सुरक्षित राख्नको लागि उनले आफ्‍नी दुई छोरी दिने प्रस्ताव पनि गरे। यो लोतको धर्मी कार्य थियो; यो लोतको प्रकृति सारको ठोस अभिव्यक्ति थियो, र परमेश्‍वरले लोतलाई बचाउन आफ्‍ना सेवकहरू पठाउनुको कारण पनि यही थियो। खतराको सामना गर्दा, लोतले अन्य केही कुराको परवाह नगरिकन यी दुई सेवकको सुरक्षा गरे; यी सेवकहरूको सुरक्षाको सट्टामा उनले आफ्‍ना दुई छोरी दिने प्रयास पनि गरे। लोतबाहेक, के यो सहरमा यस्तै कार्य गर्ने अरू कुनै व्यक्ति थियो? तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ—अहँ, त्यहाँ अरू कोही थिएन! त्यसकारण, लोतबाहेक, सदोमभित्रका हरेक व्यक्ति नै विनाशको निसाना थियो भन्‍नेमा कुनै द्विविधा छैन, र त्यो सही नै थियो—तिनीहरू त्यसैको योग्य थिए।
अघिल्लो: परमेश्‍वरले सदोमको विनाश गर्नुभएको
अर्को: परमेश्‍वरको क्रोध भड्काएकोले सदोम पूर्णतया भस्‍म हुन्छ